दक्षिण कोरियामा नो ब्रा अभियान: युवतीहरुलाई गेज रेपु को भय – HamroSamrachana
हाम्रो संरचना मङ्लबार, कार्तिक ९, २०७८ 1382 Views
कोरिया/ नो ब्रा अभियान दक्षिण कोरियामा सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदैछ । दक्षिण कोरियामा महिलाहरू भित्र ब्रा नलगाई बाहिरी पोसाक मात्र लगाई खिचिएका आफ्ना तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित गरिरहेका छन्। ब्रा नलगाउन चलाइएको NO Bra अभियान सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ।
दक्षिण कोरियामा उनी धेरैका लागि ब्रा नलगाउने अभियानको प्रतीक बनेकी छन्। अनि दक्षिण कोरियाली महिलाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन्स् ब्रा लगाउनु वा नलगाउनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताूको विषय हो।
ब्रा नलगाउने अभियान समर्थन जनाइएका केही सन्देश पाए पनि उनले कतिपय महिला र पुरुषबाट आलोचना खेपिरहेकी छन्।
धेरैले उनलाई सामाजिक सञ्जालमा अरूको ध्यानाकृष्ट गर्न चाहने व्यक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै जानीजानी उनले उत्तेजना निम्त्याएको आरोप लगाएका छन्।
म बुझ्छु कि ब्रा लगाउनु तपाईँको इच्छाको कुरा हो। तर आफ्नो स्तन उठेको देखियोस् भनेर उनी सधैँ कसिएको कमिज लगाएर तस्बिर खिच्न लगाउँछिन्। उनले त्यसो गर्नु नहुने हो, इन्स्टाग्राममा एकजना प्रयोगकर्ताले टिप्पणी गरेका छन्।
तपाईँले ब्रा नलगाएकोमा हामी केही भन्दैनौँ। हामीले यति भनिरहेका छौँ कि तपाईँले आफ्ना स्तनको मुख देखाउनुहुँदैन, अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्: लाज मान्नुपर्छ। के तिमी यसरी नै आफ्ना दिदीबहिनीका श्रीमान्‌लाई वा सासु/सुरालाई भेट्न सक्छ्यौर ?
पुरुषहरूले मात्रै होइन महिलाले पनि यस्तो अवस्थामा असहज महसुस गर्छन्, अरू प्रयोगकर्ताहरूले पोस्ट गरेका छन्।
ह्वासा नामले चिनिने अर्की चर्चित गायिकाले पनि आफ्ना तस्बिर हालेर no bra अभियानलाई फेरि चर्चामा ल्याइन्।
त्यसयता सर्वसाधारंण महिलाबीच पनि no bra अभियान लोकप्रिय भएको छ र यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। दक्षिण कोरियामा महिलाहरूले आफ्नो रुचिमा स्वतन्त्रता खोजेको यो पहिलो घटना होइन।
पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण कोरियाली महिलाहरूले पितृसत्तात्मक संस्कार, यौन हिंसा र शौचालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा पुरुषहरूले राख्ने जासुसी क्यामेराूले निम्त्याएका अपराधहरूको विरोधमा उभिँदै आएका छन्।
बीबीसीसँग कुरा गरेका केही महिलाले अहिले आफूहरू दोधारको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनीहरू ब्रा नलगाउने अभियानलाई समर्थन गर्छन्, तर ब्रा नलगाई सार्वजनिक स्थलमा जाने आत्मविश्वास उनीहरूमा छैन। त्यसको एउटा ठूलो कारण भनेको उनीहरूमा गेज रेपु को भय छ।
दक्षिण कोरियामा कसैलाई धेरै हेर्दा यदि उसले आफू हिंसामा परेको महसुस गर्छ भने त्यस्तो हेराइलाई गेज रेपु भन्ने गरिएको छ।
अट्ठाइस वर्षीया जियोङ सियोङ इन सन् २०१४ मा निर्मित नो ब्रा ब्लेमु नामक वृत्तचित्र निर्माण समूहकी सदस्य थिइन्। उक्त वृत्तचित्र ब्रा नलगाउने महिलाहरूको अनुभवका बारेमा थियो।
विश्वविद्यालयका आफ्ना साथीहरूलाई त्यो वृत्तचित्र बनाउन आफूले पहल गरेको र त्यसमा उनले प्रश्न गर्न थालिन्, ब्रा लगाउनु स्वाभाविक हो भन्ने कुरा तपाईँलाई किन लाग्छ ?
यो विषयमा धेरै महिलाहरूले सार्वजनिक रूपमा बहस गर्न थालेकोमा उनी राम्रो महसुस गर्छिन्। अझै केही महिलाहरूलाई स्तनको मुख टीशर्टबाट देखिँदा लज्जित महसुसू गर्ने गरेको उनलाई लाग्छ।
उनीहरूलाई थाहा छ कि दक्षिण कोरियामा ब्रा लगाउनुलाई अझै स्वाभाविक मानिन्छ र त्यही भएर उनीहरू ब्रा लगाउँछन्, उनी भन्छिन्।
चौबीस वर्षीया पार्क आई सिउल मोडल हुन्। उनी शरीरबारे सकारात्मक सोच्नुपर्ने अभियानमा संलग्न छिन्। गत वर्ष उनले तीन दिन ब्रा नलगाएर राजधानी सोल जाने र त्यसको भिडिओ बनाउने निधो गरिन्। लारा ओवेन र जुली यून्यङ लीले
बीबीसीका लागि तयार पारेको रिपोट